"> Izibonelelo zokuFakwa kweShishini
Isigqibo sokuDibanisa ishishini lakho sihlala senziwa xa izibonelelo zokuNgafezekisi zibiza iindleko ezincinci kunye nezithintelo zolawulo zokuseta kunye nokuqhuba iqumrhu.
Faka ishishini lakho ku:
UkuChuma kokuKhulisa iMali
Intloko yamaGosa oMdibaniso
Ukudluliselwa ngokulula kobunini
Ubumfihlo ("Umkhusane oManyeneyo")
Faka ishishini lakho kukhuseleko olongezelelekileyo. Ukwenzela ukonwabela ukhuseleko oluphezulu kumatyala asemthethweni, inkampani okanye iqumrhu kufuneka lisekwe, lisebenze, kwaye ligcinwe ngokufanelekileyo, kuzo zonke "izinto ezisebenzayo" ezenziweyo ngokufanelekileyo kwaye zilandelwa. Ukhuseleko aluzenzekeli. Ukukhuselwa ngokwasemthethweni kuyonwabela kuphela yinkampani eyakhiwe ngokuchanekileyo ngokomthetho osemthethweni. Olu khuseleko lwamatyala lubonelela ngesidambisi phakathi kwezibophelelo ezisemthethweni zeshishini, kunye nezinto zomnini zabelo. Kuba abanini zabelo abanoxanduva ngokobuqu kwizibophelelo zombutho (masikhumbule ukuba iqumrhu, emva kokuba lenziwe ngokufanelekileyo kwaye lisebenza, ngoku lithathwa njengelinye iqela), banokukhuseleka kummangalelo wobumbano. Ke, ukuba inkampani iyabandakanyeka kwityala lomthetho, izindlu zabanini zabelo okanye zeeasethi aziyi kuba semngciphekweni.
Masenze umzekelo: UJohn Smith wayenenkampani yokwakha encinci eRiverside, eCalifornia. Wayenexhala lezomthetho ovela kwityala lokwakha, ngoko ke waseka umbutho. Kuba uJohn wacetyiswa ukuba iqumrhu liqumrhu elahlukileyo kubantu abangabanini, abanini, okanye "abanini zabelo" abakhuselweyo buqu kwimithetho enxulumene neshishini. Ke xa omnye wabasebenzi bakaJohn wayengakhathali kwaye wawa ophahleni kwaye waphuka ingalo, uxanduva lubekelwe umbutho. Izinto zikaJohn zobuqu, ikhaya lakhe, iimoto kunye nokonga, zazikhuselekile kwaye zikhuselekile kuso nasiphi na isigwebo okanye ukuhlawulwa okuchasene nombutho wakhe. Ngaphandle kwesibonelelo sokhuselo olunikezelwe ngumbutho, ityala likaJohn kwishishini elinokubangela ukuba kuvezwe indlu yakhe, iimoto kunye neeakhawunti zakhe zokonga.
Faka ishishini lakho kwizibonelelo zerhafu. Kukho izibonelelo ezifanelekileyo, kunye nokonga, okufumanekayo kwishishini elihlanganisiweyo. Umzekelo, uBrian Smith., Umnini wenkampani yoyilo lwewebhu eMinneapolis, wayedla ngokuhlawula irhafu yengeniso kuyo nayiphi na inzuzo eboniswa yinkampani yakhe. Le “rhafu yeposti” yayisetyenziselwa ukuhlawula iindleko zakhe, ukongeza kwiakhawunti yakhe yokonga, kunye nokubonelela ngenkcitho ayibonileyo. Wayechitha imali eninzi “yirhafu yeposi”. Emva kokufunda ngezibonelelo zokubandakanya ishishini lakhe, ngoku ulungisa amashumi amawaka eedola ngonyaka kwingxowa yakhe yomhlala-phantsi. Imali inikwa irhafu yasimahla kwaye ikhula ngaphandle kwerhafu kude kube ngumhlala-phantsi. Olu khetho lwalungekho kuye ngaphambi kokudibanisa. Ukwabhala phantsi zonke iindleko zakhe kwezonyango, kubandakanya nemiyalelo, ngokusebenza, kwaye uyakwazi ukubhala i-100% yeepremiyamu zayo ze-inshurensi xa kuthelekiswa nokucinywa kwe-30% kubukho bokubambisana okanye kubunini bayo. Ude aqeshe imoto yenkampani kwaye ubhala isheke inyanga nenyanga kwi-akhawunti yakhe yebhanki yebhanki. Oku kukubona nje kweentlobo zezinzuzo ezikhoyo ngokuseka inkampani yakho njengequmrhu.
Elinye icebo lokonga irhafu libizwa ngokuba "kukutshintsha kwengeniso. Ukutshintshwa kwemali engenayo ivumela ukuba ingeniso yenkampani yahlulwe ngobuchule phakathi kwabanini zabelo kunye nenkampani ngendlela evumela ukuba kuncitshiswe irhafu.
Ukongeza, iqumrhu elingaphantsi kwe- $ 3 yezigidi zeerandi kwingeniso enkulu yenye yeendlela zeshishini eziphicothiweyo. Kwelinye icala, eyona fomu iphicothiweyo yeshishini yifom yengeniso yengqesho eyi- “Shedyuli C”.
Ukunyaniseka sesinye isibonelelo esifunyanwa kwinkampani ebandakanywayo. Abathengi kunye namanye amashishini bahlala beziva bekhuselekile ekubandakanyekeni kwintengiselwano esemthethweni yovimba kuba ibeka imvakalelo yokuzithemba kwinkampani. Kubatyalomali ababolekisi kunye nababolekisi kwishishini, libanikeza ulwazi lokuba ii-asethi zabo zotyalo-mali zifumana ukhuseleko olungcono kwezomthetho. Umbutho unganakho nokufumana ixabiso lokuthenga ngetyala ngaphandle kokuhlawulwa kwetyala labanini okanye ngabanini zabelo. Amanyathelo kunye nenkqubo ekufuneka ishishini elihamba kuyo ukuze ibandakanywe ibonisa umthengi ukuba inkampani ekhusele i- "Inc." emva kokuba igama lenkampani yabo ibonakalise umnqweno wabo wokuba ishishini elime endaweni yentengiso.
Dibanisa ishishini lakho kumathuba otyalo-mali. Ngelixa ubuhlakani bodwa kunye nobambiswano oluqhelekileyo luthintelwe kwindlela abanokuyonyusa ngayo imali eshishini labo, iqumrhu linganyusa imali ngokuthengisa isitokhwe senkampani, okanye inzala kwinkampani. Abatyalomali banomdla ngakumbi kwishishini apho ukubonakaliswa kwetyala labo kuyinto ubuncinci. Abatyalomali ngokufuthi bafuna imbuyekezo ephezulu kutyalo-mali lwabo ngetyala elincinci elinokwenzeka. Ukuba kukho into engahambanga kakuhle kwaye amatyala agcinwe, bafuna ukwazi ukuba amakhaya abo kunye neeakhawunti zabo azikhuselekanga ekuhlaselweni. Iibhanki ezininzi zifuna ukuba ishishini lifakwe ngaphambi kokubonelela ngemboleko mali encinci.
Ukuba ne "CEO" okanye "Mongameli" emva kwegama lomntu, kunye ne "Inc." emva kwegama lomntu kwishishini lekhadi, kungavula iminyango kwaye kubonelele ngamathuba abengayi kuba khona. Ukudibana nabanye osomashishini abaphumeleleyo kunokuveza umntu kwiingcamango zeshishini ezinokuba nefuthe elihle kwezemali. Ngapha koko, abathengi abanokubakho banokuthandabuza ngakumbi ukuva intetho yentengiso okanye isindululo seshishini ukuba ivela "kuMphathi Oyintloko" kunokuba ibe ngumnini kuphela umniniyo.
Omnye umzekelo: N. Jorgensen owayekade wathengisa ngeakhawunti yeentengiso zamakhadi okuthenga ngetyala ukuqala amashishini. Ngaphandle kwetyala lakhe lendibano, wayeqhele ukudityaniswa nokumelana nabantu abanomdla. Emva koko wafumana isilumko: "... nguN. Jorgensen, CEO weKhadi lokuQeqesha iKhadi ..." uyandisile ukubanakho ukufikelela kwabo bathatha izigqibo, kwaye ke oko kuyiphucule kakhulu inzuzo yakhe esezantsi. Inyaniso yokuba wayenesihloko sokufanisa imeko yakhe entsha eyabandakanywayo yayiyisibonelelo awayefuneka ukuba afikelele kubathathi izigqibo.
Ishishini elidityanisiweyo lihlala lihlala lihleli ngaphandle kokuba kuchazwe ngolunye uhlobo kumanqaku okufakwa. Obu bomi obungenasiphelo buvumela inkampani ukuba iqhubeke kwaye ibekhona kwaye iqhube ishishini, nokuba ilandele ukusweleka komniniyo kwangaphambili, okanye isigqibo sabanini abangabanye sokuthengisa umdla wabo kwinkampani. UWal-Mart kunye neNkampani yeZithuthi iFord, umzekelo, badlulisile ubugqwetha kumalungu osapho ekufuneka eqhubeke kwizizukulwana ezininzi.
Inkampani ebandakanyiweyo inokudlulisa ngokukhawuleza ubunini kunye nokulawulwa kokusebenza kweshishini. Esi sihlahla silawulayo sinokudluliselwa nokuba sisonke, okanye ngenxalenye, sihlala ngokuthengiswa okanye kuthunyelwa kwisitokhwe senkampani. Ukutshintshelwa kobunini ngokwesiqhelo kuyimfihlo yangasese, yangaphakathi kwaye akufani nefayile kawonkewonke.
Abalawuli abaziintloko abafumaneka kumashishini ahlanganisiweyo anceda unxibelelwano lwendibaniselwano ngexesha lotshintshiselwano ngokwenza inkqubo isebenze ngakumbi kunobuhlakani nje. Xa kuziwa kwizivumelwano ezibophelelayo kunye nezigqibo eziphakamileyo zeshishini, olu nxibelelwano luvumela izigqibo kunye nezivumelwano ukuba zenziwe ngokufaka kumntu omnye okanye amaqela amakhulu abandakanyekayo kwinkampani. Oku kwahluka kubambiswano, apho izigqibo eziphambili zihlala zenziwa liqabane ngalinye, ngemvumelwano efunekayo uninzi lwezi zigqibo.
Hlanganisa ishishini lakho ukubonelela ngokungaziwayo kubanini-zabelo, abalawuli, amagosa, kunye nabanini benkampani okanye iqumrhu. Oku kungaziwa kuxhomekeke kwimithetho yasekhaya ebekwe kuyo ishishini, kodwa kuhlala kuthetha ukuba ishishini elibandakanywayo linokuvumela umntu ukuba abaleke, alawule, kwaye abe neleshishini ngaphandle kwegama lakhe ukuvela kwingxelo yoluntu. Amagama ezabelo awaveli kwiirekhodi zoluntu. Igosa elityunjiweyo kunye nomphathi wenkonzo, apho umntu ongenguye wabanini zabelo avele kululuhlu lwamagosa yinkonzo efumaneka kumazwe aliqela. Oku kuvumela ukuba umnini ngamnye abhatalwe ngokungaziwa, ngokungafaniyo nobunini bodwa okanye intsebenziswano.
Le zezinye zezinto kunye nezibonelelo ekufuneka uziqwalasele xa uthatha isigqibo sokuthatha ixesha lokutsiba kwaye ufake ishishini lakho. Nangona yonke imeko yahlukile, ukubandakanya ishishini lakho linyathelo elilandelayo elinokubakho ukuba ezi zinto zikhankanywe ngasentla zixabisekile kuwe. Ungaqala inkqubo ngoku ngokunqakraza kwelinye lamaqhosha e-oda kweli phepha.
Kukho ezinye izinto ekufuneka zithathelwe ingqalelo xa zibandakanywa Ezi zibandakanya into yokuba kukho imimandla yaseburhulumenteni kunye ne-federal iimfuno ekufuneka kuhlangatyezwane nazo, isidingo sokuyilwa ngokuhambelana nomthetho oqhelekileyo wokubumbana kurhulumente apho ishishini likhoyo. ifakiwe, ukugcwaliswa kwamanqaku afunekayo okudityaniswa ne-ofisi echanekileyo kaRhulumente, kunye nokuhlawulwa kwerhafu kunye neerhafu zikarhulumente kunye nemirhumo, kunye nayo nayiphi na intlawulo yelayisensi yeshishini emiselwe ngurhulumente wengingqi. Iinkampani eziNgenisiweyo zingafaka ishishini lakho ngokukhawuleza nangokulula. Kukho 'izinto ezisesikweni' ezilula (ezichazwe kubude kwenye indawo kule ndawo) ekufuneka ziqwalaselwe kwimodeli yeshishini. Iqumrhu kufuneka lisebenze kunye nolawulo olubandakanya amagosa ophathamandla, kunye nebhodi yabalawuli. Oku kunokuba ngumntu omnye ophethe zonke izikhundla. Nceda uqiniseke ngokufunda inkcazo yethu malunga nale misebenzi iza nephakeji yakho, kwaye ubone ukuba singayenza njani lula inkqubo yonke ukuze wena nenkampani yakho nikwazi ukuqala ukonwabela izibonelelo zokuzibandakanya kwangoko.